Banyere Anyị - Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd.
Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd dị na National High-tech Industrial Park na Luzhou City, Sichuan Province, Southwest China, tọrọ ntọala na 1965 na nke a na-akpọbu Changjiang Excavator Works.Ọ bụ ọkachamara na-emepụta 40-220 tọn hydraulic excavators, 18-130 tọn hydraulic ihe njikwa na 10-50 tọn scrap-vehicle dismantler (Enwere ike ịkwado igwe ndị a niile iche site na mmanụ dizel, electromotor ma ọ bụ ọtụtụ mmanụ dizel) , na bụ ọkachamara n'ichepụta ntọala maka etiti na nnukwu ihe owuwu ígwè na China.
Bonny bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke mba;a mba elu-tech R & D mmemme nke China (863 Mmemme) enterprise;ụlọ ọrụ mmepụta ihe sayensị na teknụzụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụpụta akụrụngwa na mpaghara Sichuan, ma guzobe “ụlọ ọrụ teknụzụ mpaghara” na mpaghara Sichuan.
Bonny na-akwado mmepe ngwaahịa "nnukwu, ọpụrụiche, nhazi onwe onye";rube isi na mmepe mbanye ọhụrụ, kwado ụlọ ọrụ ahụ site na ịkwalite ngwaahịa yana nyocha ọhụrụ na mmepe na ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ, na-abawanye uru na ọkachamara na asọmpi, iji zụlite ahịa ọhụrụ na esenidụt kpamkpam, na-edobe isi ọnọdụ na nnukwu. Ụlọ ọrụ excavator hydraulic dị na China, mepụta igwe eji arụ ụlọ ama ama nke mba ụwa.
A na-eji ngwaahịa Bonny eme ihe n'ọtụtụ ebe maka nrigbu n'ime ogbunigwe dị iche iche metụtara ndị na-abụghị ferrous, ihe ụlọ, phosphate na kol.A ga-ejikwa ya rụọ okporo ụzọ ụgbọ oloko, okporo ụzọ, nchekwa mmiri, ike mmiri na akụrụngwa obodo.Enwere ike iji ha na-ebufe ihe n'ụdị igwe igwe igwe dị iche iche, ọdụ ụgbọ mmiri na mmiri mmiri, ịkwanye na ịkwatu yad na ogige ibu ókè.Bonny ka na-amịkọrọ nkà na ụzụ dị elu n'ụwa, jikọtara ya na ọchịchọ nke ndị ahịa si n'ụlọ na ná mba ọzọ, na-achọ mgbe niile ka teknụzụ ndozi na nkwalite nke usoro ngwaahịa, ugbu a ọhụrụ - 8 usoro ngwaahịa e n'ụzọ zuru ezu nyefere n'ime China si ahịa na exported ka. karịa mba 40 na mpaghara.
Na June 1977, Bonny rụpụtara ihe nrụpụta hydraulic nke nwere ton 40 ọhụrụ na China dabere na ntinye nke excavator R961 sitere na ụlọ ọrụ Liebherr nke Germany.Na 1985, Bonny webatara teknụzụ zuru oke (Mara Olee + Mara ihe kpatara ya) nke atọ 60-90 ton hydraulic excavators (R962, R972, R982) na ụfọdụ akụrụngwa pụrụ iche maka nrụpụta sitere na ụlọ ọrụ Liebherr nke Germany, wee malite akụkọ mmepe nke nnukwu hydraulic. ndị na-egwupụta ihe na China.N'afọ 1998, Bonny rụpụtara nke ọma onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe hydraulic mbụ nke China WY160A nke butere mgbanwe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ejizi ihe na China.N'oge mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, onye na-egwu mmiri hydraulic mbụ nke China, onye na-egwu mmiri hydraulic nke China, onye mbụ na-arụ ọrụ ọkụ eletrik nke China na onye na-ahụ maka hydraulic mbụ nke China mụrụ na Bonny.
Usoro iheomume mmepe
Tọrọ ntọala na 1965, aha ụlọ ọrụ mbụ bụ Changjiang Excavator Works.1965 ~ 1981: Main ngwaahịa: n'ibu excavator na crawler kreenu
Malite na mmepe na imepụta nke mbụ hydraulic excavator (40t) na China, wee nweta mmeri nke Yanshi Railway Intl.Ịnye asọmpi.
mmeghe nke LIEBHERR R962, R972 na R982 Usoro (Mara Olee + Mara ihe kpatara ya) (Ikike bụ afọ 8).
Bonny arụpụtala igwe ọkụ eletrik WDY452 (45t) mbụ na China.
Bonny mere nyocha nke ọma wee mepụta nke mbụ 40 ton crawler hydraulic material handler nke butere mgbanwe na njikwa ụlọ ọrụ na China.
Emecha usoro nkeonwe, gbanwee aha ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ "Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd."
Bonny nyochara wee mepụta ụgbọ ala China nke mbụ srapu CJ300-7 wee tinye ya n'ahịa.
Bonny kwagara n'ime ụlọ nrụpụta ọhụrụ dị na mpaghara teknụzụ dị elu steeti.
Achọpụtara ndị na-egwupụta ihe nke usoro 8, ndị na-ahụ maka ihe na ndị na-ekpochapụ ụgbọ ala a kpụkọrọ akpụkọ wee mepụta nke ọma, wee nyefee ya n'ahịa maka ịrụ ọrụ.